Nenguquko yokuziphatha kobulili wanika amadoda nabesifazane nenkululeko yokuzikhethela labantu ozibandakanya nabo kwezocansi. Lokhu kwaholela ekutheni ukudalwa yobulili obufanayo. Ngesikhathi esifanayo kukhona imiqondo emisha, eziphathelene ezicini ezithile kuphela zokuphila nokuziphatha kwabantu nge orientation ngokobulili ezahlukene. Njengomthetho, la mazwi abadabuka kwamanye amazwe, futhi akuzona ngokuphelele kucace izakhamuzi, kude le "blue" futhi "pink" indaba ephathwayo.
Ngokwesibonelo, akubona bonke uyazi okuphuma. Kangakanani ezahlukene kusukela umqondo ezifanayo "ukuvakasha". Phakathi naleso sikhathi, eminye imibuthano ke livame ukusetshenziswa nkulumo, okuyinto ngisho has iholide ayo konyaka. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Leli gama lathathwa ngolimi lwesiNgisi kanye elihunyushwe ngokuthi "ukudalulwa", "aphume ekamelweni." Iduna kumbe insikazi, ngokukhululekile nangomoya, okubaluleke kakhulu, ngokuzithandela wavuma baziphatha noma isimo sabo sengqondo emacenjini lamancane ubulili, isenzo ukubizwa ngokuthi ephuma. Njengomthetho, incazelo isicelo maqondana kongqingili, izitabane, ngithanda abesilisa nabesifazane futhi kobakhe abantu (esifushanisiwe njengoba iqembu labantu okukhulunywe LGBT) abakuveza alivume izintandokazi zabo zobulili noma imizimba yabo ayifani isimo sabo sengqondo.
Sikhathi - ke kukhonjiswa esidlangalaleni iqiniso ababezibheka empilweni yakho, kodwa abanye ngesimo enobudlova, ngokumelene intando kobungqingili. Lokhu ngokuvamile kwenziwa ukuyekethisa indoda ukuba ezingonakalisa idumela lakhe, umsebenzi, ukushintsha isimo sokucabanga kwabantu kuso, ngoba wonke amazwe kukhona ongqingili. Ngisho emphakathini wanamuhla, akubona bonke abantu bazimisele avule umnyango ekamelweni lakhe lokulala, kodwa kukhona lezo ziyaneliswa ikakhulukazi nomphakathi ukuzokha baziqaphele bona kanye ukuthandwa esengeziwe, ngokuba abantu kwabobulili. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa uvame kakhulu kwezokuzijabulisa.
Kancane amaqiniso angokomlando
Okokuqala leli qiniso eliyisisekelo Cuming ukuphuma ecabanga ngo-1869. Ngazibekela ummeli isiJalimane intatheli, ukuvikela amalungelo kanye nezithakazelo ezincane, uKarl Genrih Ulrihs. Wayengumuntu linombono wokuthi uma ufuna ukuba ebonakalayo, udinga akuveza ukumemezela ngokwawo ngokusebenzisa eza ukuphuma. I ngani lesi senzo, ngokuvumelana amaJalimane, ezinkulu wavula zobungqingili bangenza libe nethonya elikhulu kubantu futhi igunya ukusebenzisa. Umuntu wokuqala yomphakathi ezibalulekile owayengeyena wayesaba ukutshela iqiniso ngaye, kwaba Imbongi yaseMelika Robert Duncan. Azenzile ephuma, futhi ngokushesha wayesebika usike ebuthweni. Ngemva kwalokho, ngo-umagazini, wathi ezweni nasemhlabeni wonke becindezelwe amancane.
Phakathi nekhulu le-20, umqondo wegama elithi "ephuma" ngenxa wezifo Evelyn Hooker, oye enikelwe omningi kwakhe ehlola umphakathi gay, akuseyona ijagoni kwenzekani amagama esayensi.
Ukubaluleka Cuming ukuphuma
ukwaneliseka Zokuziphatha empilweni kwenzeka kuphela uma umuntu ephila ngokuvumelana hhayi kuphela ngokwabo kodwa futhi nomphakathi. Ukuze kuzuzwe lokhu, udinga ukuba abe nesibindi ukuze baveze izintandokazi zabo zobulili. Uma indoda noma owesifazane ngempela abangongqingili, bamukela leli qiniso futhi uqiniseka e okukhethayo, akufanele ulifihle, sifihle yokulala, ngisho umshado ngokumelene nentando yabo ngenxa umphakathi. Lokhu kunomthelela ongemuhle kwi esimweni sengqondo somuntu. Lapha angasiza ephuma. Inani icala abe nomthelela omuhle isimo, isimo, kufika impumuzo eside elindelwe.
Lona uma ukuqonda ku ingxenye izilaleli. Kodwa, empeleni lokhu kwenzeka ngaso sonke isikhathi. Yingakho kukhona okuningi izincwadi ngesihloko esithi "Yini siphuma" kanjani futhi nini ukuze kube ngcono. Omunye imanuwali kunazo owaziwa, ebhalwe inhlangano American "Bazali, emndenini nakubangani abesilisa abathandana bodwa kanye lesbians."
Cuming nasemigwaqweni - a eziyinkimbinkimbi multi-step izinqubo. Odokotela bengqondo ukweluleka kancane kancane ukuvula zonke baziphatha, kusukela okungcono kumngane noma ilunga lomndeni okukuye efudumele kakhulu, eziqinile, ubuhlobo obufudumele. Ngokuvamile kwenzeka ukuthi abantu bazi non-bendabuko zonke ozakwabo nabangane, kodwa abaqapheli eziseduze. Ngezinye izikhathi ukutshela umuntu ongamazi kulula ukudlula kwakhe. Ezinye ucwaningo, ozinikele Cuming ukuphuma kanye nokuvuleka jikelele indoda emphakathini, baye babonisa ukuthi kancane umuntu efihla kwabanye, kancane anakho ukuba aqambe amanga, abakaze, ukhathazeke.
Omunye izigaba nzima kakhulu Cuming ukuphuma kubhekwa ukuze waziwe phambi kwabazali babo. Abakwazi ukuthola ulwazi ngendlela efanele ngokuqonda. Abazali kumethusile ukuthi ingane yabo akuyona njengawo wonke umuntu. Badinga isikhathi nosizo wezengqondo. Abazali abaningi bayenqaba ukwamukela leli qiniso, jezisa izingane, indiva, uphonswe aphume endlini, ukuba uziyeke. Ezinye isikhathi ngizama ukugwema noma yiziphi izingxoxo ngezihloko ngokobulili, bekholelwa ukuthi bonke lobu buwula, ubudala, izindleko, futhi uma ungenalo ukugxila kule akhawunti, konke uya lodwa.
Abanye abazali icabange ngokujulile ubungqingili isifo, uqale ukwelapha izingane zabo ngosizo ukwelashwa reparative. Zonke lezi izenzo omama nobaba abangela umonakalo omkhulu engqondweni yengane, ukudlondlobala isimo kuphela.
2013 - unyaka Cuming ukuphuma
Okthoba 11 kubhekwa usuku olusemthethweni lapho zonke khumbula ukuthi ephuma, kanye ukubukela ukuqashelwa yomphakathi hhayi kuphela abangane nezihlobo, kodwa futhi abantu ababaluleke edumile kusukela yesehlakalo. Unyaka nonyaka isibalo osopolitiki LGBT, abaculi, abadlali kanye abadlali, okukhombisa ukuthi abantu sazikhohlwa wesabe ukwahlulela abantu, kanye nokuzikhethela non-bendabuko isiba kuyinsakavukela. Kuphephile ukusho ukuthi ngo-2013 Akuzona komunye ntambama nokuvuma, inkontilaki kaNgcobo ku 365. Tshela wonke ukuqashelwa engenakwenzeka, inombolo yabo omkhulu, kodwa lokho kulindelwe kakhulu futhi ngamemeza proclaiming
Dzhodi Foster kwamenza ephuma ngesikhathi somkhosi umklomelo ku-Golden yayo Globes.
nomdlali wamabhayisikobho waseMelika Wentworth Miller yamemezela nobungqingili lwakhe encwadini yokwenqaba ukuza Russia, njengoba kukhona homophobes eziningi.
diver British Tom Daley wathatha ngevidiyo ukuvuma kwayo awubeka Inthanethi.
umlingisi Canadian futhi umculi Victor Garber ivumile ukuthi kuye gay futhi ubuhlobo nendoda iminyaka 14.
NBA basketball Dzheyson Kollinz, oye wanquma ukuthi kudingeka bathembeke nawo wonke umuntu.
umculi Philippine Charris.
Robbi Rodzhers yathi gay, futhi wasuka football.
umlingisi Irish Endryu Skott bayeka ukufunda isiRashiya e Putin sika izinkulumo VV ngemva kokwenza umthetho ongqingili.
Uprofesa wezifo zengqondo Dinesh protuberance.
Skater Brian Boitano.
Ingabe uyazi ukuthi kukangaki ungayenza uthando?
Okufanele ukwenze ku tattoo unyawo?